Loogu talagalay PC
loogu talagalay Xbox
Bidix iyo midig ee NEON JOYCON kontaroolaha suufka leh ee gacanta
by admin 21-12-03
1. Waafaqid qumman: Waxaa loogu talagalay Nintendo Switch - beddelka ugu habboon ee Switch Joycon; isku mid ah badhamada Joy-con asalka ah; gacan kasta waxaa loo isticmaali karaa si madaxbanaan ama lagu xidhi karo console si loogu isticmaalo qaabka gacanta; xoq u adkaysta oo aan simbiriirixan lahayn walxo ABS waara. Ergonomically comf
NINTENDO SWITCH PRO kontaroolaha beddelka beddelka kontaroolaha, kontaroolaha furaha bilaa-waayirka ah ayaa taageeraya dib u dallaci kara
1. [Nooca 12.0.0 isticmaalayaasha: Weydii iibiyaha inuu helo xirmo cusub oo casriyeyn ah! ! ! 】 Wireless iyo waxqabadka xasilloon: Iyada oo loo marayo Bluetooth, kantaroolaha beddelka ayaa si degdeg ah oo xasilloon loogu xidhi karaa console-ka beddelka. Tiknoolajiyada wireless-ka ee waxqabadka sare leh waxay ku siin kartaa calaamado lagu kalsoonaan karo gudaha 3 ...
Xakamaynta fiilo-la'aanta ee ku habboon PS-4/PRO/SLIM/PC
Madal la jaanqaadi karta: Koontaroolaha wireless-ka ee PS-4 wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa PS-4/Pro/Slim/PC. Nooca 2021: Awoodda batteriga waxaa loo cusboonaysiiyay 1000mAh, masaafada xakamaynta waxay noqon kartaa ilaa 32 cagood. Matoorada gariirada laba-geesoodka ah, joysticks, shaashadda taabashada, dareenka badhanka, saamaynta dhawaaqa, iyo dareenka ayaa leh al...
Alaabta cusub ee PS4 xakamaynta bilaa-waayirka
1. Qaab cusub oo gamepad-gaar ah oo loogu talagalay ps-4. Muuqaalka cusub ee la cusboonaysiiyay, midab iswaafajinta iyo nashqadeynta badhanka hufan ayaa si wada jir ah u dhigma, taasoo kuu ogolaanaysa inaad haysato ciyaar ka duwan. Sidoo kale waa mid fudud, kaliya (0.47) LB. Ma dareemi doontid daal ka dib markaad haysato muddo dheer...
Tilmaamaha shaqada badhanka xakamaynta ciyaarta
by admin 21-11-05
1. Bateriga waxaa lagu rakibay jeexdin dhexe iyadoo loo eegayo tirarka togan iyo kuwa taban. Ka dib marka la isku xiro, badhanka gacanta ayaa iftiimin doona; 2. Ku xidh USB-ga bilaa-waayirka gacanta ee sanduuqa oo bilow. Waxaad soo dejisan kartaa qaar ka mid ah ciyaaraha la mid ah lobby-ka ciyaarta, sida goobta ciyaarta, haddii ay...
Waqtigu wuu duulaa. Todoba sano ka dib koontaroolihii ugu horeeyay ayaa soo baxay, kontorool aad u badan oo caan ah ayaa soo baxay - kantaroolkii asalka ahaa ee NES, nooca kontoroolka cas iyo cadaan ee Nintendo. Waxa laga yaabaa in maamulahani aanu aqoon u lahayn ciyaartoyda qaar. Waxaan aaminsanahay in qof walba uusan noqon doonin qof aan aqoon lahayn ...
Sidee loogu xidhaa gamepad-ka gacanta taleefanka gacanta?
Talaabooyinka lagu xidhidhiyaha ciyaarta moobaylka iyo talefanka gacanta waxa ka mid ah: Haddi nidaamka talefanka gacanta aanu si toos ah u raadin aaladda, y...
Sida loo shido kontaroolaha Xbox 360 ee fiilada leh
1. Rog kontaroolaha si uu dhabarku kuugu soo jeedo. (2)/, Koontaroolka ku yaal bartamaha midig ee hoose, waxaad ku arki doontaa istiikaro yar oo leh barcode. Calaamaddu waxay ku xigtaa Microsoft/Xbox 360 hologram. Ka saar summadan oo dul saar daloolkii furka daboolay. 2. Dabci boolasha dhabarka...
Ma yahay kantaroolaha ciyaarta moobilka mid mudan in la iibsado?
Ma mudan tahay in la iibsado? Waxay kuxirantahay ciyaarta aad ciyaareyso iyo sababta aad u tiraahdo dhibaatada la qabsiga awgeed. Inta badan ciyaaraha mobilada ee suuqa ma laha adabtarada u dhashay ee lagu shaqeeyo. Si kale haddii loo dhigo, waxaa laga yaabaa inaadan u isticmaalin inaad ku ciyaarto ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto marka aad soo iibsato kontaroolaha oo aad b...
Marxalad cusub oo horumarinta ciyaarta: guga warshadaha gamepad ee Shiinaha
Marka loo eego xogta aan rasmiga ahayn, shixnadaha kontoroolka ciyaarta ee Shiinaha ayaa ku dhawaad ​​90% ka ah wadarta guud ee adduunka, laakiin dariiqa calaamadaynta bilaashka ah ee soosaarayaasha ciyaarta xakamaynta ee Shiinaha ayaa ahayd mid aad u dhib badan. Tirada badan ee aasaaska u ah ciyaaraha waaweyn ayaa wiiqay faa'iidada warshadaha. Sida ciyaartu calaamatu...
Ku xidh kontaroolaha XBOX One iyo console-ka
Waxay ku qaadan doontaa wakhti yar inaad ku xidho kontaroolaha martigeliyahaaga. Waxaad isticmaali kartaa saddexda tilaabo ee soo socda si aad u shaqeyso. Ku xidh gacanta 1. Daar XBOX ONE hosty 2. Ku rid laba batari AA ah gacanta 3. Riix oo hay batoonka XBOX ilaa koontaroolahaagu shidmo, badhanka XBOX ayaa...
Sida loo sameeyo Win7 game controller
by admin 21-09-03
Maanta, waxaan ku soo qaadan doonaa sida loo dejiyo kontoroolka ciyaarta Win7 iyo sida loo sameeyo goobaha kontoroolka ciyaarta Win7, si aad si fudud u xalliso dhibaatada. Si aad u ciyaarto qaar ka mid ah ciyaaraha nidaamka Win7, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto gacan ama koontarool aad ku ciyaarto. Gacan-qabeyaasha qaarkood waxay u baahan yihiin in la dejiyo ka hor ciyaarta, laakiin...
123 Xiga > >> Bogga 1/3
Cinwaanka:Qolka 2214, Fenlin International Building Longgang Avenue,Longgang, Shenzhen, Shiinaha
< img height="1" width="1" style="display:none;" alt = "" src = "https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3009188&fmt=gif" />